Nhau dzeBhaibheri: Jerusarema Rinoparadzwa - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Ava anopfuura makore 10 chifo chapakaendesa Nebhukadnezari kuBhabhironi vaIsraeri vose vakadzidza zvikuru. Uye zvino tarira chiri kuitika! Jerusarema riri kuroromeswa. Uye vaIsraeri vasina kuurawa vari kutorwa savasungwa kuenda Bhabhironi.
Yeuka, ndozvakanyevera vaprofita vaJehovha kuti zvaizoitika kana vanhu vasina kuchinja nzira dzavo dzakashata. Asi vaIsraeri havana kuterera vaprofita. Vakapfuurira chaizvo kunamata vamwari venhema panzvimbo paJehovha. Saka vanhu vanodikanirwa kurangwa. Tinoziva izvi nokuti muprofita waMwari Ezekieri anotiudza zvinhu zvakashata zvaiitwa navaIsraeri.
Unoziva here kuti Ezekieri ndiani? Ndimumwe wamajaya akaendeswa Bhabhironi naMambo Nebhukadnezari makore anopfuura 10 ruparadziko rukuru rweJerusarema rusati rwaitika. Dhanieri neshamwari dzake nhatu, Shadraki, Meshaki naAbhedhinego, vakaendeswawo panguva imwe cheteyo kuBhabhironi.
Ezekieri achingunoveri muBhabhironi, Jehovha anomuratidzira zvinhu zvakashata zvinoitika muJerusarema patembere. Jehovha anoita izvi nenenji. Ezekieri achingunoveri muBhabhironi zvomenemene, asi Jehovha anomuonesa chinhu chose chiri kuitika patembere. Uye chinoonwa naEzekieri chinovhundutsa!
'Tarira zvinhu zvinosembura zviri kuita vanhu patembere, Jehovha anoudza Ezekieri. 'Tarira madziro akafukidzwa nemifananidzo yenyoka nedzimwe mhuka. Uye tarira vaIsraeri vanozvinamata!' Ezekieri anoona zvinhu izvi, ndokunyora chiri kuitika.
'Uri kuona zviri kuitwa navatungamiriri vaIsraeri muchivande here?' Jehovha anobvunza Ezekieri. Hungu, anozvionawo. Pana varume 70, uye vose vari kunamata vamwari venhema. Vari kuti: 'Jehovha haaziri kutiona. Akasia nyika.
Zvino Jehovha anoratidza Ezekieri vamwe vakadzi kumusoro kwesuo retembere. Vagerepo vachinamata mwari wenhema Tamuzi. Uye tarira varume vari apo pamukova wetembere yaJehovha! Pana vanenge 25 vavo. Ezekieri anovaona. Vari kukotamira mabvazuva vachinamata zuva!
'Ava vanhu havandiremekedzi,' Jehovha anodaro. 'Havaiti zvinhu zvakashata bedzi asi vanouya kutembere yangu chaiko ndokuzviita!' Saka Jehovha anopikira kuti: 'Vachanzwa simba rehasha dzangu. Handizovanzwiri tsitsi pavanoparadzwa.'
Angova makore matatu bedzi Jehovha aratidza Ezekieri izvi zvinhu panopandukira vaIsraeri Mambo Nebhukadnezari. Saka anondorwisana navo. Pashure pegore nehafu vaBhabhironi vanopwanya masvingo eJerusarema ndokuroromesa gutaro. Uzhinji hwavanhu hunourawa kana kuti hunoendeswa senhapwa Bhabhironi.
Neiko Jehovha akarega uru ruparadziko runotyisa rwuchiitika kuvaIsraeri? Nokuti havana kuterera Jehovha uye havana kuterera mitemo yake. Kunoratidzira kuti kunokosha sei kuti tigaroite zvinotaurwa naMwari.
Pakutanga vanhu vashomanene vanobvumirwa kugara munyika yaIsraeri. Mambo Nebhukadnezari anoisa muJudha anonzi Gedharia mukutarisira ava vanhu. Asi ipapo vamwe vaIsraeri vanoponda Gedharia. Zvino vanhu vanotya kuti vaBhabhironi vachauya ndokuvaparadza vose nokuti chinhu ichi chakashata chakaitika. Saka vanomanikidzira Jeremia kuenda navo, uye vanotizira Egipita.
Ikoku kunosia nyika yeIsraeri rava dongo. Hakuna anogara munyikamo kwamakore 70. Idongo. Asi Jehovha anopikira kuti achadzosera vanhu vake munyikayo pashure pamakore 70. Parizvino, chii chiri kuitika kuvanhu vaMwari munyika yeBhabhironi kwavakaendeswa? Ngationei.
2 Madzimambo 25:1-26; Jeremia 29:10; Ezekieri 1:1-3; 8:1-18.
Chii chiri kuitika kuJerusarema nevaIsraeri vari kuratidzwa pamufananidzo?
Ezekieri ndiani, uye zvinhu zvipi zvinotyisa zvaanoratidzwa naJehovha?
Nemhaka yokuti vaIsraeri havaremekedzi Jehovha, anovimbisa chii?
Mambo Nebhukadnezari anoitei pashure pokunge vaIsraeri vamupandukira?
Nei Jehovha achibvumira kuti kuparadzwa kwakaipa uku kuitike kuvaIsraeri?
Nyika yaIsraeri inosiyiwa sei isina kana vanhu, uye kwenguva yakareba sei?
Verenga 2 Madzimambo 25:1-26.
Ndiani ainzi Zedhekia, chii chakaitika kwaari, uye izvi zvakazadzisa sei uprofita hweBhaibheri? (2 Madz. 25:5-7; Ezek. 12:13-15)
Ndiani uyo Jehovha akapa mhosva nokuda kwokusatendeka kwose kwakaitwa nevaIsraeri? (2 Madz. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Mak. 36:14, 17)
Verenga Ezekieri 8:1-18.
ChiKristudhomu chakatevedzera sei vanamati vezuva vechiIsraeri vakaramba kutenda? (Ezek. 8:16; Isa. 5:20, 21; Joh. 3:19-21; 2 Tim. 4:3)